i-adminacount888 I-XNUMiyi-Juni 17 Imfundo, Impilo, Izindaba zakamuva
Njengabazali nabanakekeli niyizibonelo ezinhle kakhulu nomthombo wokuqondisa ezinganeni zakho. Lo mhlahlandlela wabazali bezithombe zocansi ze-inthanethi uzokusiza uzizwe uqiniseka ngokwanele ukuba nezingxoxo eziyinselele. Funda ngemiphumela yempilo yengqondo ye-porn, umthelela womzimba kanye nemiphumela emibi yezocansi. Lolu lwazi luzokuvumela ukuthi uvikele izingane zakho ezinhlobonhlobo zokulimazeka okuye kwahlonzwa ochwepheshe bezempilo kanye nezinkulungwane zabasebenzisi bangaphambili. Sifaka isigaba ekuthumeleni imiyalezo yocansi kanye nemiphumela esemthethweni kuwe nengane yakho.
Eminyakeni yokuthomba, izingane ziqala ukufuna ukwazi kakhulu ngocansi futhi zifuna ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ngakho. Ngani? Ngoba inani eliphambili lokuqala leNdalo ukukhiqizwa kocansi, ukudlulisela ngofuzo. Futhi senzelwe ukugxila kukho, sikulungele noma cha. I-intanethi yindawo yokuqala abantwana abaqala ngayo ukuthola izimpendulo.
Ngesikhathi sobhubhane, isithukuthezi sizovumela izingane ezengeziwe ngengozi noma ngomklamo, ukuthi zihlangane nokuthola okungapheli kwezithombe zobulili ezingcolile. Ngaphandle kokuthi ufundise wena, bese ingane yakho / izingane zakho, ngemiphumela engaba khona empilweni yengqondo nangokomzimba, lapho-ke usengozini enkulu yezinkinga ngokuzayo. Uxolo ngokungabi nalutho, kepha lokhu kuhlola okungokoqobo.
Umkhuba wokubuka ezocansi unamandla okubangela imiphumela elandelayo elandelayo:
Ukungazinaki izindawo ezibalulekile empilweni
Uhlu olungenhla luhunyushwe encwadini "I-Trap Porn”NguWendy Malz
Siyethemba ukuthi lo mhlahlandlela wabazali bezithombe zocansi ze-Intanethi uzosiza izingane zakho zikwazi ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwezocansi ngokuphepha futhi zikuvumele ube ngumzali noma umnakekeli ongcono kakhulu ongaba yikho.
Intsha eningi ithi ifisa ukuthi abazali bayo babe matasa kakhulu ekuxoxeni nabo ngezithombe ezingcolile. Uma bengakwazi ukukucela usizo, bazoyaphi?
Iwebhusayithi enkulu kunazo zonke futhi ethandwa kakhulu I-Pornhub igqugquzela amavidiyo akhiqiza ukukhathazeka njengobulili obucashile, ukuhlukunyezwa, ukuhlukunyezwa, ukudlwengulwa kanye namaqembu ezigebengu. Incest ingenye yohlobo olukhula ngokushesha ngokusho I-Pornhubimibiko yakhe uqobo. Iningi lakhona likhululekile futhi lifinyeleleka kalula. I-Pornhub ibona lo bhubhane njengethuba elihle lokuhudula abasebenzisi abaningi futhi inikezela ukufinyelela kwamahhala kumasayithi abo we-premium (avame ukukhokhelwa) kuwo wonke amazwe.
Le minithi ye-2, iyagqama izithombe inikeza ukubuka konke okusheshayo. Ungayikhombisa nezingane zakho futhi njengoba ingenayo izithombe zocansi.
Le nkulumo ye-TEDx kaSolwazi Gail Dines “Ukukhulela esikweni eliqukethe ezocansi"(I-13 mins) ichaza ngamagama acacile ukuthi ama-video omculo, izingosi ze-porn kanye nabezindaba zenhlalo bakwakha kanjani ubulili bezingane zethu namuhla.
Nansi inkulumo ehlekisayo ye-TEDx (imizuzu engu-16) ebizwa ngokuthi “Yeka ukuthi i-Porn Porn ihlukumeza kanjani ngokocansi"Ngumama waseMelika nomfundisi wezocansi Cindy Pierce. Umhlahlandlela wabazali bakhe uthi kungani izingxoxo eziqhubekayo nezingane zakho mayelana nezithombe zobulili ezingcolile zidingekile kakhulu futhi yini ezithandayo. Bona ngezansi ukuthola izinsiza eziningi mayelana nokuthi ungaba kanjani lezo zingxoxo.
Izingane ezineminyaka eyisithupha ubudala zifinyelela ezithombeni zobulili ezingcolile. Ezinye izingane ziyahehwa futhi zifune kakhulu lokhu, ezinye zihlukumezekile futhi zibe nobusuku obunzima. Izinto zokwenziwa ngabantu abulukhuni azilungele izingane zanoma yimuphi unyaka ngenxa yesigaba sazo sokukhula kobuchopho. Nayi umbiko ivuselelwe ngonyaka ka-2017 ibizwa nge- “… bengingazi ukuthi kujwayelekile ukubukwa…” ukuhlolwa okuyizinga kanye nenani lomthelela wezithombe zocansi ezi-inthanethi kumanani, izimo zengqondo, izinkolelo nokuziphatha kwezingane nabantu abasha. ” Kwakukhishwe kusuka eMiddlesex University yi-NSPCC kanye neKhomishini Yezingane yaseNgilandi naseWales.
Ukubuka ividiyo engaphansi kwayo kubiza i- $ 4.99 kuphela futhi yimali esetshenziswe kangcono ongathemba ngayo. (Asitholi mali ngalesi sincomo.) Ochwepheshe abaningi nezinsizakusebenza esizincomayo kulo mhlahlandlela wabazali nazo ziyavela kuleyo mbhalo. URob noZareen babeka yonke imali nobungcweti babo ekwenzeni lokhu njengenkonzo kwabanye abazali, ngakho-ke sicela uyithenge uma ungakwazi. Ngiyabonga. Uma ungafuni ukusebenzisa imali, kukhona amanye amavidiyo amahle kakhulu atholakala mahhala.
“Ungasoli nehlazo” ingane yokubuka izithombe zocansi. Kuyo yonke indawo eku-inthanethi, kuvela ezinkundleni zokuxhumana nakumavidiyo omculo. Kungaba nzima ukukugwema. Ezinye izingane ziyidlulisa ngenxa yokuhlekisa noma i-bravado, noma ingane yakho ingakhubeka kuyo. Kungenzeka ukuthi nayo bayifuna ngenkuthalo. Ukwenqabela ingane yakho ukuyibuka kuphela kuyenza ilingeke ngokwengeziwe, ngoba njengoba isisho sakudala siqhubeka, 'Izithelo ezingavunyelwe ziyathandeka kakhulu'.
Izingane azidingi inkulumo eyodwa enkulu mayelana nobulili. Bona udinga izingxoxo eziningi ngokuhamba kwesikhathi njengoba bedlula eminyakeni yentsha. Ngamunye kufanele abe neminyaka efanelekile, cela usizo uma uludinga. Obaba nomama bobabili badinga ukubamba iqhaza ekuzifundiseni bona kanye nezingane zabo ngomthelela wobuchwepheshe namuhla.
Owayenguprofesa wesayensi yokuhlalisana kwabantu, umbhali nonina, uDkt Gail Dines, ungumsunguli weCustom Reframed. Umbone ekhuluma ne-TEDx "Ukukhulela esikweni eliqukethe ezocansi”(13 amaminithi). Yena nethimba lakhe bakha ithuluzi lamathuluzi lamahhala, elizosebenza kakhulu elizosiza abazali ukuthi bakhulise izingane ezikhuthaza ukubuka ezocansi. Ungaba kanjani nengxoxo: bheka i- Amasiko aphikisiwe Abazali Uhlelo.
Le yincwadi entsha ebhalwe nguColette Smart, ongumama, owayenguthisha nodokotela wezengqondo obizwa ngokuthi “Bayoba Kulungile“. Incwadi inezibonelo ze-15 zezingxoxo ongaba nazo nezingane zakho. Iwebhusayithi futhi inezinye izingxoxo eziwusizo ze-TV nomlobi ngokwabelana nemibono ethile ebalulekile.
Ukudambisa ukunika ingane yakho i-smartphone noma ithebhulethi isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Izingcingo ezingamaselula zisho ukuthi ungahlala uthintana. Ngenkathi kungabonakala njengomvuzo wokusebenza kanzima esikoleni samabanga aphansi noma samabanga aphansi ukwethula ingane yakho nge-smartphone ekungeneleni esikoleni samabanga aphakeme, bona lokho okwenzayo ekufinyeleleni kwabo ezifundweni ezinyangeni ezizayo. Ingabe izingane ziyakudinga ngempela ukufinyelela kwe-24 ihora lezinsuku ku-inthanethi? Ngenkathi izingane zingathola izabelo eziningi zomsebenzi wesikole okwenziwa online, ingabe ukuzijabulisa kungakhawulelwa kumaminithi we-60 ngosuku, noma njengokuhlola? Bangu eziningi zokusebenza ukuqapha ukusetshenziswa kwe-intanethi ngokukhethekile ngezinhloso zokuzijabulisa. Izingane ze-2 iminyaka nangaphansi akufanele zisetshenziswe izikrini.
Vala i-intanethi ebusuku. Noma, okungenani, khipha zonke izingcingo, amaphilisi namadivayisi wemidlalo egumbini lokulala lengane yakho. Ukuntuleka kokulala okuvuselela amandla kuyanda ukucindezela, ukudangala nokukhathazeka ezinganeni eziningi namuhla. Badinga ukulala ubusuku bonke, amahora ayisishiyagalombili okungenani, ukubasiza ukuba bahlanganise ukufunda kosuku, ukubasize bakhule, benze imizwa yabo futhi bazizwe kahle.
Vumela izingane zakho zikwazi lokho I-porn yenzelwe i-dollar yezigidigidigidi izinkampani zobuchwepheshe ukuze "bakhonze" abasebenzisi ngaphandle kokuqaphela kwabo ukwakha imikhuba ebenza babuyele ngokunye. Konke ngokugcina ukunaka kwabo. Izinkampani zithengisa futhi zabelana ngolwazi oluseduze mayelana nezifiso nemikhuba yomsebenzisi kumaqembu wesithathu nabathengisi. Yenziwe umlutha njengemidlalo e-intanethi, ukugembula kanye nemidiya yezenhlalo ukugcina abasebenzisi bebuyela emuva ngokuningi uma nje bekhathazekile noma bekhathazeka.
Ukubhekana nemibhikisho: Izingane zingabhikisha ekuqaleni, kodwa izingane eziningi zisitshele ukuthi zingathanda ukuthi abazali bazo bazibeke isikhathi sokubakhokha isikhathi esifanele futhi banikeze imingcele ecacile. Awukwenzi ingane yakho noma yimuphi umusa ngokuwashiya 'ngokoqobo' kumadivayisi abo.
Recent ucwaningo iphakamisa ukuthi izihlungi zodwa ngeke zivikele izingane zakho ekufinyeleleni izithombe zobulili ezingcolile eziku-intanethi. Umhlahlandlela wabazali ugcizelela isidingo sokugcina imigqa yokuxhumana ivulekile njengobaluleke kakhulu. Ukwenza ucansi kube nzima ukufinyeleleka kodwa njalo kuyisiqalo esihle ikakhulukazi nezingane ezincane. Kuyafaneleka ukubeka ehlunga kuwo wonke amadivayisi e-inthanethi futhi ukuhlola on a njalo ukuthi bayasebenza. Bheka nge-Childline noma umhlinzeki wakho we-inthanethi mayelana nezeluleko zakamuva zokuhlunga.
Kunezinhlelo eziningi zesoftware nezinketho zokusekelwa. Ikydz uhlelo lokusebenza ukuvumela abazali ukuba baqaphele ukusetshenziswa kwezingane zabo. Igalari Guardian ikwazisa abazali uma isithombe esolisayo sibonakala kudivayisi yengane yabo. Isebenza ngezingozi eziphathelene nokuthumela imiyalezo nge-SMS.
Moment is a uhlelo lokusebenza lwamahhala evumela umuntu ukuba aqaphele ukusebenzisa kwabo ku-intanethi, wabeka umkhawulo futhi athole ama-nudges uma efinyelela leyo mingcele. Abasebenzisi banomkhuba wokunciphisa ukusetshenziswa kwabo ngumkhawulo obalulekile. Lolu hlelo lokusebenza lufana kodwa alukhululekile. Isiza abantu ukuqalisa ubuchopho babo ngokusiza endleleni. Kubizwa I-Brainbuddy.
Nazi ezinye izinhlelo ezingase zibe lusizo: Amehlo E-Covum; I-Bark; I-NetNanny; Mobicip; Ukulawulwa Komzali weQustodio; I-WebWatcher; INorton Family Premiere; I-VIP Yasekhaya ye-OpenDNS; I-PureSight Multi. Ukuvela kwezinhlelo kulolu hlu akuyona into evunyelwe yi-The Reward Foundation. Asitholi nzuzo yemali ngokuthengiswa kwale mikhiqizo.
Incwadi enhle emakethe iyisikhulu sethu sokucwaninga esihlonishwayo uGary Wilson. Singasho lokho kodwa kuyenzeka kube yiqiniso. Kubizwa ngokuthi “Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha”. Kuyisiqondisi esikhulu sabazali. Nikeza izingane zakho ukuba zifunde njengoba zinamakhulu izindaba ezenziwa abanye abantu abasha kanye nezinkinga zabo nge-porn. Abaningi baqala ukubuka i-inthanethi ye-porn besebancane.
Le ncwadi iyatholakala ngephepha, kwi-Kindle noma njenge-audiobook. Kwabuyekezwa ngo-Okthoba 2018 ukubheka ukuqashelwa kwe-World Health Organisation kwesigaba esisha sokuxilongwaIsiphazamiso Ekuziphatheni Kokuziphatha Kocansi okucashile“. Ukuhumusha kuyatholakala ngesiDashi, isi-Arabhu nesiHungary kuze kube manje, nabanye ngepayipi.
Setha Ubuchopho Bengane Yakho
Incwadi yengqondo yengane uDkt Victoria Dunckley "Setha kabusha i-Brain yengane yakho"Futhi mahhala blog chaza imiphumela yesikrini esiningi kakhulu esikrinini somntwana. Okubaluleke kakhulu ukuthi uhlela uhlelo lwalokho abazali abangakwenza ukuze basize ingane yabo ukuba ibuyele ithrekhi futhi.
UDkt Dunckley akakuhlukanisi ukusetshenziswa kwe-porn kepha ugxile kakhulu ekusetshenzisweni kwe-inthanethi. Uthi cishe ama-80% wezingane azibonayo azinakho ukuphazamiseka kwengqondo okutholakale ukuthi utholile futhi akuthandazelwa zona, njenge-ADHD, i-bipolar disorder, ukudangala, ukukhathazeka njll. Kunalokho abe nakho akubiza nge- 'electronic screen syndrome. ' Lesi sifo silingisa izimpawu eziningi zalezi zinkinga zempilo yengqondo ezivamile. Izinkinga zempilo yengqondo zivame ukwelapheka / zincishiswe ngokususa amagajethi we-elektroniki isikhathi esingamaviki ama-3 ezimweni eziningi, ezinye izingane zidinga isikhathi eside ngaphambi kokuba ziphinde ziqale ukusetshenziswa kepha zilinganiselwe kakhulu.
Incwadi yakhe ibuye ichaze nokuthi abazali bangakwenza kanjani lokhu kusihlahlandlela sabazali abasebenza ngezinyathelo ngokubambisana nesikole sengane ukuqinisekisa ukubambisana okuhle emiphakathini emibili.
Imithombo ye-inthanethi yamahhala yabazali
Yilwa Nezidakamizwa Ezintsha Ungakhuluma kanjani nezingane zakho nge-porn.
Kubazali eScotland ukuxhumana Izingane 1st.
Ukusetshenziswa njalo kwezithombe zocansi ezi-inthanethi okwenziwa yizingane kwakha ubuchopho bengane, ithempulethi yazo evusa inkanuko yobulili. Inomthelela omkhulu ekuthumeleni imiyalezo yocansi kanye ne-cyberbullying. Izingane eziningi zibukela i-hardcore porn, kulapho zidinga khona amazinga aphakeme futhi aphakeme wokuvuselela ezocansi. Lokhu kungenxa yokuthi ubuchopho buhlala futhi buyehluleke namazinga aphansi wokukhuthaza. Ngokuhamba kwesikhathi lokhu kungaholela ezinkingeni eziningi zengqondo nangokomzimba futhi kungabi nokuphendula okujabulisayo emisebenzini yansuku zonke. Ukukhathazeka okukhulu ngabazali kufanele kube yimiphumela yezomthetho engaba khona. Bona lapha ukuthola eminye imininingwane ebalulekile ekuthumeleni imiyalezo yocansi ngokuziphatha okubi, ukuziphindisela kuma-porn nokunye okuya ngokuya kushushiswa ngamaphoyisa. Kuthunyelwa imiyalezo yocansi eScotland. Kuthunyelwa imiyalezo yocansi I-England, Wales neNyakatho Ireland.
Uma unengane ehlolwe ukuthi iku-Autism spectrum, kufanele wazi ukuthi ingane yakho ingaba sengozini enkulu yokuthola ukubhekelwa ezithombeni zobulili ezingcolile kunezingane ezi-neurotypical. Uma usola ukuthi ingane yakho ingaba semawodini, kungaba ngumqondo omuhle ukuba nayo ihlolwe uma kwenzeka. Izinsizwa ikakhulukazi ezine-ASD noma izidingo ezikhethekile zokufunda zimelwe ngokungafani nezibalo zokona ngokocansi. Kuyathinta cishe i-1% yabantu besibalo esikhulu kodwa ngaphezulu kwe-33% yabantu abahlukumeza ngokocansi abasesimweni esibanzi noma banobunzima bokufunda.
I-Autism spectrum disorder yisimo sezinzwa esikhona kusukela ekuzalweni. Akuyona inkinga yezempilo yengqondo. Ngenkathi kuyisimo esivame kakhulu kwabesilisa, abesifazane nabo bangaba nakho. Ngemininingwane engaphezulu funda la mabhulogi porn and autism; indaba yomama; futhi autism: yangempela noma fake?
Uhulumeni wase-UK ukuhlehlisile (hhayi ukukhanselwa) ukuzibophezela kwakhe ekuvikeleni izingane online. Bona lokhu incwadi evela kumphathiswa kahulumeni kuNobhala Wenhlangano Yezingane Yezinhlangano Ezibandakanya Ukuphepha Nge-Intanethi.
Inhloso yomthetho wokuqinisekiswa kweminyaka (Idatha Yezomnotho Yedijithali, Ingxenye 3) kwakuwukuba izinkampani zezentengiso zobulili ezingcolile zifake isoftware yokuqinisekisa yobudala ephumelelayo ukukhawula ukufinyelela kwabantu abangaphansi kweminyaka engu-18 kumawebhusayithi ezithombe zocansi. Bona lokhu blog ngakho ukuthola eminye imininingwane. Imithetho emisha ifuna ukufaka amasayithi ezokuxhum kanye namawebhusayithi ezithombe zocansi angcolile.
Umhlahlandlela wabazali ugcine ukubuyekezwa nge-17 Juni 2020